ह्याप्पी बर्थ डे मेसी ! | सबै खेल
ह्याप्पी बर्थ डे मेसी !
१० असार २०७७, बुधबार १२:५६
३३ वर्षअघि आजकै दिन अर्जेन्टिनाको रोजारीयोमा एउटा बालक जन्मिए । तीनै बालक अहिले फुटबलको सुपरस्टार बनेका छन्, फुटबल करिअलको उतराद्र्धमा छन् । ती हुन्, अर्जेटिन तथा बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी ।
३३ वर्षअघि सानो काँठीको बच्चो जन्मिँएर च्याँच्याँ रुँदा कसैले सोचेको थिएन होला कि भविष्यमा त्यो बच्चा दुःखी हुँदा आधा पृथ्वी शोकमा डुब्ने छ र ऊ खुशी हुँदा आधा संसार खुशीले उफ्रिनेछ ।
स्टिल फ्याक्ट्रि काम गर्ने बुबा र चुम्बक उद्योगकी कामदार आमाबाट जन्मिएका मेसी वर्तमान फुटबलका सबैभन्दा राम्रा फुटबलर हुन् । उनी जब मैदानमा देखिन्छन्, तब पुरा विश्व नै दुई हिस्सामा बाँडिन्छ । उनको पक्ष र विपक्षमा । उनी र उनको खेल कौशल मन नपारउन झुन्ड सारै सानो छ, उनको सकर्थकका अगाडि यो झुण्ड विलिनजस्तै हुन्छ ।
मेसीले आफ्ना समर्थक र विरोधी दुवैमा आफ्नो प्रभाव जमाएका छन् । मेसी खुशी हुँदा उनका फ्यानमात्र खुशी हुन्छन्, तर उनी दुःखी हुँदा विपक्षी पनि दुःखी हुन्छन् अथवा कमसेकम खुशी हुन सक्दैनन् । मेसीले फुटबल खेलेर कमाएको अमूल्य चिज यही हो ।
फुटबलमा भिजेको परिवारमा जन्मिएका मेसी सानैदेखि फुटबल खेल्थे । उनले चार वर्षको उमेरमा स्थानीय क्लब ग्रान्डोलीमा बाबुको प्रशिक्षणमा फुटबल खेल्न सुरु गरेका थिए । तर, उनलाई फुटबल खेल्ने प्रेरणा भने उनकी हजुरआमा सेलियाले दिइन् । ट्रेनिङमा जाँदा होस् वा खेल्न जाँदा उनलाई जहिले हजुरआमाले नै लाने गर्थिन् । ११ वर्ष पुग्न केही दिन मात्र बाँकी हुँदा हजुरआमाको मृत्युपछि मेसी धेरै विक्षिप्त भए । त्यसपछि उनले आफ्ना हरेक गोल हजुरआमाप्रति समर्पित गरे । गोल गरेपछि दुवै हातका चोरऔंला माथि उठाउँदै आकाशतर्फ हेर्दै मेसी हजुरआमालाई सम्झन्छन् ।
मेसी बार्सिलोनाका खेलाडी भएपनि अर्जेन्टिनी क्लब नेवेल्स ओल्ड ब्वाइजका स्थायी समर्थक हुन् । ६ वर्षको हुँदा उनले सो क्लबबाट खेल्न थालेका थिए । १९८७ (मेसी जन्मिएको साल) मा जन्मिएका बच्चा खेलाडी समावेश गरेर नेवेल्सले एउटा टिम बनाएको थियो ।
आफुले खेलेका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खेलमा अपराजित रहेको सो टिमको नाम थियो, ‘‘दि मेसिन अफ एटिसेभेन’ । त्यस दौरान ६ वर्ष न्यूवेल्सका लागि खेलेका मेसीले लगभग ५०० गोल गरेका थिए। उनको त्यो रेकर्ड न आजसम्म कसैले तोड्न सकेको छ, न निकट भविष्यमा कसैले तोड्ने सम्भावना नै छ । सायद त्यसका लागि मेसी आफैँ अर्को जन्म लिएर आउनु पर्ला !
क्लबको सिनियर टिमको खेलको हाफटाइममा मैदानमा फुटबलका स्किल र ट्रिक देखाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने मेसीको फुटबल करियर १० वर्षको उमेरमै धराशायी भयो । मेसीमा ‘ग्रोथ हर्मोन डिफिसिएन्सी’ नामको रोग देखियो । यो रोग लागेपछि शरिरका मांशपेसी र हड्डी बढ्दैन र यसको उपचार एकदमै महँगो हुन्थ्यो । उनका बावुको स्वास्थ्य बिमावापत आउने रकम दुई वर्षको उपचारमै सकियो । त्यसबेला नै उनको उपचारका लागि मासिक एक लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो । उनको उपचारका लागि सुरुमा त न्यूवेल्स क्लबले पनि सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो तर उपचार खर्च सुनेर पछाडि हट्यो ।
अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्समा अवस्थित क्लब रिभर प्लेटका प्लेमेकर पाब्लो ऐमर मेसीका आदर्श खेलाडी थिए । मेसीको खेलले ऐमर पनि पहिल्यै प्रभावित भइसकेका थिए । उनले रिभर प्लेटको माध्यमबाट मेसीको उपचार गराई सोही क्लबमा आबद्ध गराउने तयारी सुरु गरे । तर, त्यसबेला अर्जेन्टिनाको आर्थिक अवस्था खस्किँदो थियो त्यसैले क्लबले त्यत्रो आर्थिक भार उठाउन असमर्थ भयो ।
स्पेनको क्याटालोनियामा मेसीका आफन्त बस्थे । उनीहरुले सेप्टेम्बर सन् २००० मा क्याटालोनियाको सबैभन्दा ठूलो क्लब बार्सीलोनामा मेसीको ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाइदिए । मेसीको महंगो उपचारको बार्सीलोना नै अन्तिम विकल्प थियो । मेसी त्यतिबेला जम्मा १३ वर्षका थिए । त्यसबेला युरोपमा त्यति सानो उमेरको विदेशी खेलाडी आबद्ध गर्नु एकदम अस्वभाविक थियो । त्यसैले बार्सीलोनाको सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय दिन सकेन तर बार्सीलोनाको सिनियर टिमका निर्देशक चार्ली रेक्साच उनलाई जसरी पनि आबद्ध गर्न चाहन्थे । १४ डिसेम्बरमा बार्सीलोनालाई निर्णय गर्ने अन्तिम अल्टिमेटम दिइयो । साथमा केही कागज नहुँदा हतारमा हडबडाएका रेक्साचले होटलको न्याप्किन पेपरमा लेखेर बार्सीलोनाका लागि मेसीको पहिलो कन्ट्रयाक्टमा हस्ताक्षर गराए ।
उता न्यूवेल्ससँगको सम्झौता सकिएको थिएन यता बार्सीलोनामा आएका साना विदेशी खेलाडी – एकाध मैत्रिपूर्णबाहेक यो झमेलाले लगभग एक वर्ष मेसीले फुटबल खेल्न पाएनन् । यसै त अन्तर्मुखी स्वभावका मेसी त्यसमाथी फुटबल खेल्न नपाएर निराश भएका, सुरुसुरुमा उनलाई उनकै टिमका साथीहरुले लाटो सोच्थे । १४ वर्षको उमेरमा उनको रोगको उपचार सकियो । उनको रोग ‘ग्रोथ हर्मोन डिफिसिएन्सी’को एकमात्र उपचार ‘ग्रोथ हर्मोन रिप्लेसमेन्ट’ सफल भयो । तर, सुरुमै उपचार हुन नसक्दा मेसीको उचाई भने बढ्न सकेन । यहि रोगका कारण मेसी युरोप र अमेरिकाका खेलाडीको औसत उचाइभन्दा हाचा छन् । तर, यसले उनको फुटबल खेल्ने क्षमता र कौशलमा केही फरक पार्न सकेन ।
२००१ मा रोजारियोबाट सपरिवार बार्सीलोनाको मैदान ‘क्याम्प नोउ’ नजिकै एक अपार्टमेन्टमा बसाई सरेका मेसी बार्सिलोनाको युथ एकेडेमी ला मासियामा भर्ना भएको एक वर्षपछि फेब्रुअरी २००२ मा बल्ल स्पेनको रोयल स्पेनिस फुटबल फेडेरेसनमा आबद्ध भए र सबै खेल खेल्न पाउने अनुमति पाए । यससँगै बार्सिलोनाको फुटबल इतिहासको नयाँ अध्याय आरम्भ भयो र सँगसँगै विश्व फुटबलमा पनि नयाँ इतिहास लेखिन सुरु भयो ।
बार्सिलोनाको युथ फुटबलको सबैभन्दा सफल टिम ‘बेबी ड्रिम टिम’का मेसी मुख्य खेलाडी थिए । त्यहीँदेखि जेरार्ड पिके र सेस फाब्रिगास मेसीका मिल्ने साथी बने । बार्सिलोनाको ‘क्याडेट–ए’ टिमका लागि पहिलो पूरा सिजन खेल्दा उनले ३० खेलमा ३६ गोल गर्दै इतिहासमै पहिलोपटक बार्सीलोनालाई ट्रेबल ९स्पेनिस लिग, स्पेनिस कप र क्याटलान कप० जिताए ।
सिजनको अन्त्यतिर चिउँडोमा चोट लागेपछि मेसीले एक हप्ता आराम गर्नुपर्‍यो । ‘कोपा क्याटालुन्या’को फाइनलमा मेसी चोटका कारण अनुहारमा प्लास्टिकको मास्क लगाएर खेले । असहज भएपछि उनले मास्क फालेर बल अगाडि बढाए । उनले १० मिनेटमा २ गोल गरेर बार्सीलोनाको ४–१ को जितको मार्गचित्र कोरिदिए । इस्प्यान्योलविरुद्धको त्यो फाइनल बार्सिलोनामा अहिलेसम्म पनि ‘पार्टिडो डे ला मास्कारा’ अर्थात ‘नकावधारीको पार्टी’को नामले चर्चित छ । सिजनको अन्त्यसँगै उनलाई आर्सनलबाट प्रस्ताव आयो तर, फेब्रिगासले इंग्लिस क्लबमा जाने निर्णय गरिसकेका कारण उनले बार्सिलोना नछाड्ने निर्णय गरे ।
२००३–०४ को सिजन मेसी युथ टिममा गरेको प्रदर्शनले सबैलाई प्रभावित गर्दै बार्सिलोनाकै माथिल्लो स्तरका टिममा निरन्तर उक्लँदै थिए । त्यसबेला उनले एकै सिजनमा पाँच फरक समूहका टिमबाट डेब्यू गर्ने रेकर्ड पनि राखे । बार्सिलोनाको सिनियर टिम त्यतिबेला धर्मराएको थियो । इन्टरनेशनल ब्रेकका दौरान बार्सिलोनाले युथ टिमबाट मेसीसहित केही प्रतिभाशाली खेलाडीको टिमलाई परिक्षणका लागि अभ्यास खेलमा बोलायो । सो अभ्यास खेलमा सिनियर टिमका खेलाडीलाई नै मेसीलाई रोक्न हम्मेहम्मे पर्‍यो ।
एउटा बच्चोले आफुलाई मुसो खेलाएपछि सिनियर खेलाडीले उनीविरुद्ध धेरै ट्याकल र फाउल गरेर लडाए । तर, हरेकपल्ट उनी हिम्मत नहारी उठ्थे र लडाउन आइरहेका बार्सीलोनाका ४–५ जना हस्ती खेलाडीलाई उस्सै छलाएर बल अगाडी बढाउँथे । सेन्टरब्याकहरु समेत उनको खुट्टामा बल पर्नासाथ नर्भस हुन थालिसकेका थिए ।
उनको त्यो खेल हेर्ने सबैले उनलाई त्यसबेला ‘एलियन’को उपनाम दिएका थिए । त्योदिन उनको खेल हेर्ने धेरैजनामध्ये एक थिए, रोेनाल्डिन्हो । खेलपछि रोनाल्डिन्होले आफ्ना समकक्षी खेलाडिलाई मेसी फुटबलमा धेरैमाथि पुग्ने पनि बताएको बार्सिलोनाका त्यसबेलाका धेरै खेलाडीले बारम्बार बताउँदै पनि आएका छन् । छिट्टै रोनाल्डिन्हो र मेसीको मित्रता पनि भयो । उनी मेसीलाई ‘सानो भाई’ (लिटल ब्रदर)’ भन्थे ।
१६ वर्ष चार महिना २३ दिनको उमेरमा मेसीले जोसे माउरिन्होको टिम पोर्टोविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा ७५औं मिनेटमा सब्स्टिच्यूटका रुपमा बार्सिलोनाको सिनियर टिमका लागि डेब्यू गरे । त्यसपछि फुटबल फेरि कहिल्यै उस्तै रहेन ।
पिएसजीका तीनसहित लिग वानका ७ खेलाडीमा कोरोना संक्रमण